Isilayidi Esinamathela Esilungisweni Abakhiqizi & Abahlinzeki - Ifektri Yokumboza Ngophawuda we-Powder
Uchungechunge Lwesilayidi Se-Drawer
Imikhiqizo yethu ithengiswa ngaphansi kwemikhiqizo emithathu ehlonishwa kakhulu: i-YANGLI, i-GERISS, i-HIFEEL. Ziyi-drawer system, amaslayidi afihliwe, amaslayidi we-Ball, ama-Slides wethebula, ama-hinges afihliwe, izibambo, ama-hinges amahhavini nezinye izinsimbi zefenisha zehadiwe, ezisetshenziselwa ifenisha, amakhabethe, izinto zokusebenza zasekhaya njll.
Insimbi engagqwali isikhafu shaf ...
Indlebe igesi single cooker kuhhavini ...
Isiqeshana kwikhabethe lomnyango we-hinge ...
86mm Ukuphakama side ekhabetheni pan ...
150mm ukuphakama ekhabetheni isilayidi s ...
Uhlaka lobuso ikhabethe lokufafaza phansi khweza isilayidi sokuzivala
Isingeniso:Uhlaka lobuso ikhabethe lokufafaza phansi khweza isilayidi sokuzivala. Kwenziwe ngomshini wokugaya. Ingasebenzela amakhemikhali ohlobo lobuso baseMelika.Umthamo womthwalo ozungeze ama-25 KGS nokuhamba ngebhayisikili izikhathi ezingaphezu kuka-50,000. Isici yi-roller slide enamapayipi ebhalansi, ukushelela okushelelayo ngomsindo ophansi, umsebenzi ozibandakanya, ngababili bezitobha zokuma ukuvimba ukwakheka kwesilayidi. Ukusetshenziswa kobuso obuphambili besifutho ubuchwepheshe, obunobuthi obungemvelo, obunamandla bokulwa nokugqwala, obokulwa nokugqwala.
Imodeli No .: US02A
604 Series European phansi obandayo self close powder camera roller slide
Isingeniso:604 Series European phansi obandayo self close powder camera roller slide yilona uhlobo elula ekhabetheni slide. Kwenziwe ngomshini wokugaya. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwamathalathi efenisha.Umthamo wokulayisha ozungeze ama-25 KGS nebhayisikili ngaphezu kwezikhathi ezingama-50,000. Isici yi-roller slide enamapayipi ebhalansi, ukushelela okushelelayo ngomsindo ophansi, umsebenzi ozibandakanya, ngababili bezitobha zokuma ukuvimba ukwakheka kwesilayidi. Ukusetshenziswa kobuso obuphambili besifutho ubuchwepheshe, obunobuthi obungemvelo, obunamandla bokulwa nokugqwala, obokulwa nokugqwala.
Imodeli No .: YA-01
I-FGV Series ezansi ukukhweza i-powder yokuvala i-powder eningizimu Melika idilidi
Isingeniso:I-FGV Series ezansi ukukhweza i-powder yokuvala i-powder eningizimu Melika idilidi amaslayidi yilona hlobo olulula kakhulu lwesilayidi sedilowa. Kwenziwe ngomshini wokugaya. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwamathalathi efenisha.Umthamo wokulayisha ozungeze ama-25 KGS nebhayisikili ngaphezu kwezikhathi ezingama-50,000. Isici yi-roller slide enamapayipi ebhalansi, ukushelela okushelelayo ngomsindo ophansi, umsebenzi ozibandakanya, ngababili bezitobha zokuma ukuvimba ukwakheka kwesilayidi. Ukusetshenziswa kobuso obuphambili besifutho ubuchwepheshe, obunobuthi obungemvelo, obunamandla bokulwa nokugqwala, obokulwa nokugqwala.
Imodeli No .: YA-02
Iphaneli eseceleni le-86mm Height drawer side slide ibhokisi lebhokisi lensimbi
Isingeniso:Iphaneli esehlangothini le-86mm Height drawer side slide ibhokisi lebhokisi lensimbi yilona uhlobo olulula kakhulu lohlelo lwamakhowa. Kwenziwe ngomshini wokugaya. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwamathalathi efenisha.Umthamo wokulayisha ozungeze ama-25 KGS nebhayisikili ngaphezu kwezikhathi ezingama-50,000. Isici yi-roller slide enamapayipi ebhalansi, ukushelela okushelelayo ngomsindo ophansi, umsebenzi ozibandakanya, ngababili bezitobha zokuma ukuvimba ukwakheka kwesilayidi. Ukusetshenziswa kobuso obuphambili besifutho ubuchwepheshe, obunobuthi obungemvelo, obunamandla bokulwa nokugqwala, obokulwa nokugqwala.
Imodeli No .: YA-03A86
Isilayidi sebhokisi le-118mm lensimbi (i-powder camera roller slide)
Isingeniso:Isilayidi se-118mm sensimbi yebhokisi lensimbi (i-powder camera roller slide) uhlobo olulula kakhulu lwedrowa. Kwenziwe ngomshini wokugaya. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwamathalathi efenisha.Umthamo wokulayisha ozungeze ama-25 KGS nebhayisikili ngaphezu kwezikhathi ezingama-50,000. Isici yi-roller slide enamapayipi ebhalansi, ukushelela okushelelayo ngomsindo ophansi, umsebenzi ozibandakanya, ngababili bezitobha zokuma ukuvimba ukwakheka kwesilayidi. Ukusetshenziswa kobuso obuphambili besifutho ubuchwepheshe, obunobuthi obungemvelo, obunamandla bokulwa nokugqwala, obokulwa nokugqwala.
Imodeli No .: YA-03A118
Isilayidi sebhokisi lesimbi lensimbi esingu-150mm
Isingeniso:Isilayidi sebhokisi yensimbi yensimbi engu-150mm uhlobo olulula kakhulu lohlelo lwamakhabethe. Kwenziwe ngomshini wokugaya. Ungayisebenzisa kulo lonke uhlobo lwamathalathi efenisha.Umthamo wokulayisha ozungeze ama-25 KGS nebhayisikili ngaphezu kwezikhathi ezingama-50,000. Isici yi-roller slide enamapayipi ebhalansi, ukushelela okushelelayo ngomsindo ophansi, umsebenzi ozibandakanya, ngababili bezitobha zokuma ukuvimba ukwakheka kwesilayidi. Ukusetshenziswa kobuso obuphambili besifutho ubuchwepheshe, obunobuthi obungemvelo, obunamandla bokulwa nokugqwala, obokulwa nokugqwala.
Imodeli No .: YA-03A150